सबैभन्दा बढी कावासोतीको, कम बौदीकालीको – Dainik Lumbini
स्थानीय तहमा करोडौंको बेरुजु
नवलपुर । नवलपुर जिल्लाको सबै स्थानीय तहमा करोडौंको रकम बेरुजु भएको पाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को स्थानीय पालिकाको महालेखा परीक्षकको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा नवलपुरका सबै स्थानीय तहको धेरैथोरै रकम बेरुजु देखाएको छ । त्यसैगरी पालिकाहरुले महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा प्रयोग गरी वित्तीय विवरण तयार गरेको नपाइएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएअनुसार ५२ लाखदेखि ६ करोड ५० लाखसम्म बेरुजु रहेको छ ।
सबैभन्दा बढी कावासोती नगरपालिकाको ६ करोड ५० लाख ३७ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
कावासोतीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश घर्तीले बेरुजुमध्येको केही रकम फछ्र्यौट भएको र केही बाँकी रहेको बताए । कावासोतीपछि गैँडाकोट नगरपालिकाको सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । गैडाकोटको ५ करोड ९९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
४ नगरपालिकाहरुमध्ये सबैभन्दा कम देवचुली नगरपालिकाको बेरुजु देखिएको छ । देवचुली नगरपालिकामा २ करोड ७६ लाख ४३ हजार बेरुजु देखिएको छ । देवचुली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोविन्द सिग्देल महालेखा परीक्षणले देखाए जस्तो बेरुजु नरहेको दाबी छ । उनले भने –‘टोली आएर हतारहतार टिपनटापन गरेर जानु र नगरपालिकाको कुरै नसुनेर आफ्नो ढंगको प्रतिवेदन बनाएको कारण बेरुजु देखिएको हो ।’
लेखापरीक्षणबाट रु. ६ करोड ५० लाख ३७ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु.२ लाख २९ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु. १५ लाख ४१ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु. ८३ लाख ९० हजार र पेश्की रु. ५ करोड ४८ लाख ७७ हजार रहेको छ ।
लेखापरीक्षणबाट रु. २ करोड ७६ लाख ४३ हजार बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु.२ लाख ५ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु.१ करोड ९५ लाख ९२ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु. ७० लाख ९६ हजार र पेश्की रकम रु ७ लाख ५० हजार रहेको छ ।
लेखापरीक्षणबाट रु. ३ करोड ६१ लाख ५६ हजार बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु.८ लाख ४३ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु.२ करोड ४९ लाख ८८ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.२८ लाख २२ हजार र पेश्की रु. ७५ लाख ३ हजाररहेको छ ।
लेखापरीक्षणबाट रु. ५ करोड ९९ हजार बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु.७९ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु.३ करोड ८ लाख १८ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.१ करोड १६ लाख २३ हजार र पेश्की रु ७५ लाख ८० हजार रहेको छ ।
लेखापरीक्षणबाट रु.३ करोड ९ लाख ५१ हजार बेरुजू देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु. १ करोड ८० लाख ३३ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु.१ लाख, नियमित गर्नुपर्ने रु. ९४ लाख १५ हजार र पेश्की रु. ३४ लाख ३ हजार रहेको छ ।
लेखापरीक्षणबाट रु ५२ लाख २१ हजार बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु.१४ लाख २१ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु.७० हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.२ लाख र पेश्की बेरुजू रु ३५ लाख ३० हजार रहेको छ ।
लेखापरीक्षणबाट रु.१ करोड ५२ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु.४१ लाख ६६ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु.८ लाख २९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने रु.९८ लाख ४८ हजार र पेश्की बाँकी रु ४ लाख १५ हजार रहेको छ ।
लेखा परीक्षणबाट रु.२ करोड ८७ लाख ८४ हजार बेरुजु देखिएको छ । सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने रु.७ लाख १८ हजार, प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने रु.२ करोड २९ लाख, नियमित गर्नुपर्ने रु. ५१ लाख ६६ हजार रहेको छ ।
१७ लाख घुससहित समातिए नापीका कर्मचारी
६ जिल्लामा पुग्यो सलह